China Acoustic Office Fanamboarana sy Fitaovana | Hongshida
sokajy: vahaolana akustika decosound 9mm 12mm 24mm wallpanel
compositio n: biby fiompy 100% (60% namboarina)
milanja t: 9mm: eo ho eo.5.5kg, isaky ny tontonana 12mm: eo ho eo.7kg isaky ny tontonana 24mm: eo ho eo.11kg isaky ny tontonana
fanamafisam-peo: sanda nrc: 0.35 (tsy misy elanelan'ny rivotra)
sanda nrc: 0,55 (tsy misy rivotra g ap) sanda nrc: 0,75 (tsy misy elanelan'ny rivotra)
Ireo mpizara divay miorina amin'ny acoustique dia manasongadina ny fizarana ny faritra malalaka-planina takiana amin'ny akustika na ny fiainana manokana, manana endrika isan-karazany ho an'ny takelaka mpizarazara isika, azon'ny mpikatroka maro samihafa ampiasaina amin'ny habaka ampahibemaso, ary ny fampiharana isan-karazany amin'ny asa. habakabaka. Ny fibre polyester-manintona feo dia nahatsapa famaritana antsipirihany momba ny takelaka fanamafisam-peo: 1220 * 2420 * 9mm ny tabilao manodidina ny 3 metatra toradroa, ny fahatsapana ny feo fibre polyester dia tena vokatra maitso, ny fibre polyester dia manintona feo tsapan'ny fibre polyester 100% amin'ny alàlan'ny haitao haingam-pandeha haitao haitao sy endrika endrika fikotrana hafanana landihazo cocoon mba hiantohana ny firafitry ny akustika, hahatonga azy io ho lasa feo mitroka, afo-porofon-javatra ary hafanana hafanana amin'ny zavatra miavaka. Ao amin'ny tabataba 125 ~ 4000 hz, ny coefficient fitrohana feo ambony indrindra dia mihoatra ny 0.9, izay manafoana sy manitsy ny fotoana fiverimberenana mifanaraka amin'ny fepetra isan-karazany, manala ny fahalotoan'ny feo, manatsara ny fihenan'ny feo ary manatsara ny hazavan'ny fiteny. Fihetseham-po mahatsapa ny fibre polyester: miaraka amin'ny malefaka toy ny kitapo malefaka, endrika voajanahary manankarena, loko miloko isan-karazany ho an'ny safidy, maodely haingon-trano tsotra mitambatra vokarin'ny haingon-tsofina manintona feo, mamorona aina, milamina, tontolo maoderina, mafana sy kanto. Flame-retardant: haitao fanodinana manokana fitaovana fanaovan-tsolika fibre polyester, mba hananany fahombiazana maharitra afo, afaka hahatratra ny haavon'ny b1 mahazaka afo.
Ny toetoetran'ny afo amin'ny polyester, dia mamaritra ny fahombiazany amin'ny insulate thermal, ka mamorona toerana mari-pana tsy miovaova. Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana: ny fiarovana ny fahatsapana fanamafisam-peo vita amin'ny fibre polyester dia aseho amin'ny lafiny roa. Amin'ny lafiny iray, ny toetra mekanika tena tsara an'ny fitaovana, lanja maivana izy io ary tsy ho simban'ny fiatraikany toy ny akora marokoroko toy ny plasterboard vita amin'ny perforated sy ny tabila fanaovana tsindry fibre simenitra.
Etsy ankilany, ny famoahana akora manimba, ny fizahan-toetra ny departemanta mifandraika amin'ny firenena, ny famoahana ny fenitry ny formaldehyde ≤1.5 mg / 1, ny valin'ny fitsapana dia 0,05 mg / 1. Mba hihaonana amin'ny fenitra nasionaly gb18580-2001e1 fenitra takiana, mifanaraka amin'ny fampiasana mivantana ny takiana amin'ny haingon-trano. Milamina:
(1) ny hakitroka dia eo amin'ny 0,2 fotsiny, ny metatra toradroa rehetra dia 2 kilao, ny tena hazavana fitaovana, mampihena be ny enta-mavesatra fananganana, mamorona ny fanamafisam-peo, ny afon'afo, ny lanja maivana, ny fampidirana haingo fanandramana vaovao.
(2) fitoniana ara-batana tsara, tsy ho fiovan'ny mari-pana sy ny hamandoana ary ny fanitarana sy ny fihenan-dàlana. Avelao ny vokatra haingo tonga lafatra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, nefa tsy mamela soritra fanamboarana.
(3) endrika malefaka, voajanahary, elastika avo lenta, eo ambanin'ny fiantraikan'ny hery ivelany lehibe dia tsy ho tapaka mihitsy, mahazaka ny kianja sy ny karazan'adoka rehetra misy fiatraikany tsy misy antony.
Ny fahatsorana amin'ny fananganana: fanapahana boaty tsotra, fanapahana loko isan-karazany, fizarana tsotra, fitsaboana tsotra amin'ny zoro, fomba kanto tonga lafatra dia azo taratra mora foana. Tsy misy landihazo mifoka feo, tsy misy birao haingon-trano, na tsy misy fitaovana fanampiana aza, amin'ny alàlan'ny famafazana tsotra, paty, fiaramanidina, fantsika ary fiasa fototra hafa afaka hahatratra ny vokatra haingo haingo sy fampisehoana mahaliana. Ahenao ny vidin'ny tetikasa sy ny tsingerin'ny fananganana. Mora vovoka, mora tazonina.
Ny vovoka sy loto, miaraka amina fanadiovan-drivotra sy vovoka dia azo sintomina. Ny toerana maloto koa dia afaka mampiasa lamba famaohana hanampiana rano sy fikosehana hamafana. Vokatra misy haingo, insulation, retardant flame, fiarovana ny tontolo iainana, vatana maivana, fanodinana mora, fahamarinan-toerana, fanoherana ny fiatraikany, fikojakojana mora sns. Tonga ny safidy voalohany amin'ny haingon-trano anatiny fitaovana manintona feo. Azo ampiharina amin'ny trano opera, trano fanaovana sarimihetsika, studio fandraisam-peo, studio, studio, studio, efitrano fitsapana, tobim-pahitalavitra, radio, biraon'ny orinasa, efitrano misy asa maro, efitrano fihaonambe, studio, efitrano fampisehoana, efitrano malalaky, gymnasium, fialamboly ary fialamboly tanàna, trano fandraisam-bahiny, ktv, efitrano fanaovana tarika, villa avo lenta na fiainana an-trano, toy ny fitakiana akustika amin'ireo toerana misimisy kokoa.
Teo aloha: Fibre nylon staple
Manaraka: Acoustic nahatsapa ambony miaraka amin'ny tontonana akustika
Biraon'ny fanaka akustika
Fanaka amin'ny birao azo fehezina